အခမဲ့ BF Scalper EA ၏ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex ကွက်အခမဲ့ BF Scalper EA ၏
အခမဲ့နောက်ကွယ်မှယုတ္တိဗေဒ BF Scalper EA ၏ ရိုးရှင်းပေမယ့်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည် - EA အသုံးပြုသည် breakouts ၏ Bollinger တေးဂီတအဖွဲ့များ entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်အချက်ပြမှုများ၏။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရပ်တန့်အရှုံးအဆင့်ဆင့် 20 နှင့် 60 pips အကြားခြားနားသည်။
သငျသညျ 4-8 pips အကြားသေးငယ်တဲ့ပုံသေ TP ကိုအသုံးပြုဖို့ပါသို့မဟုတ်အနေအထားကိုဂရုစိုက်ဖို့ထွက်ပေါက်ယုတ္တိဗေဒထားခဲ့နိုင်သည်။
အဆိုပါထွက်ပေါက်ယုတ္တိဗေဒလည်း BB ညွှန်ပြချက်အပေါ်အခြေခံသည်နှင့်စျေးအနီးရှိသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက် BB လိုင်းချိုးသည့်အခါကပင်အရှုံးပေါ်ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ဤအခွငျးအားဖွငျ့မှာထားတော်မူသည်ကို BandBreakExit အနုတ်တဦးတည်းအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါင်းတစျနှစျယောကျထားတဲ့ parameter သည်။
အခမဲ့ BF Scalper EA ၏ မြင့်မားသောပြန့်ပွားမှုကာကွယ်မှုရှိသည် - ဤအချက်သည်အရေးကြီးသည်၊ အကယ်၍ သင်သည်ဥပမာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုပါက၎င်းကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ၊ 10 နှင့်ကုန်သွယ်မှုအချို့ပြုလုပ်မည်သို့မဟုတ် 20 pips များပျံ့နှံ့သွားလျှင်ပင်ထိုကဲ့သို့သောကုန်သွယ်မှုတစ်ခုသည် 10 ကောင်းသောကုန်သွယ်မှုမှပျမ်းမျှအမြတ်ကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ ဤကုန်သွယ်မှုအမျိုးအစား၏အကောင်းဆုံးပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာ 2-3 အကောင်းဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန့်သတ်ချက်အမိန့်များကိုမသုံးစွဲကြပါ။
ထောကျပံ့ငွေကြေးအားလုံး: GBPUSD, EURUSD, EURCHF, EURAUD, GBPCAD, USDCAD, USDCHF နှင့် USDJPY
default settings ကိုများအတွက်များမှာ GBPUSD ။ ငါအရမ်းအခြားအထောကျပံ့အားလုံးအတှကျအစုံဖိုင်များကိုပြင်ဆင်ကြပြီ။ ငါကဒီမှာကသူတို့ကိုမပါဝင်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ, ငါသည်သင်ကသူတို့ကိုစလှေတျမညျပေးပါ။
ဤတွင်အချို့သော optimization အကြံပေးနေကြသည်။
မျိုးဗီဇ algorithm ကိုမသုံးပါနဲ့
အများဆုံး2သတ်မှတ်ချက်များကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်တစ်ခုတည်းကိုသာအကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးကျသောတန်ဖိုးကိုရှာဖွေသည်
အနည်းဆုံး6လများနှင့်အနည်းဆုံး 200 အရောင်းအဝယ်ပြုမှုများအတွက်အကောင်းဆုံး - ဤသည်မှာကွေးသောအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်အမှန်တကယ်အခြေအနေများတွင်အမြတ်အစွန်းအနည်းဆုံးရရှိရန်အခွင့်အရေးအနည်းဆုံးရရှိနိုင်သောအချို့သောကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကိန်းဂဏန်းများကိုရရှိရန်အကြွင်းမဲ့နိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။
အားလုံး parameters တွေကိုများအတွက်အများဆုံး5optimization သံသရာမှာလုပ်ဆောင်ပါ။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြီးမားသောအဆင့်မြှင့်တင်မှုအဆင့်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဥပမာ - သင်သည် stop loss ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါကသင့်လျော်သောခြေလှမ်းသည်5pips များမဟုတ်ပါ။ 1 pips များဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ EAs အားလုံးအတွက် M1 ပွင့်လင်းသောစျေးနှုန်းစမ်းသပ်မှုကိုအသုံးပြုနေသည် - ၎င်းသည်လုံလောက်သည်။
ယခုပျော်စရာကောင်းသောအပိုင်း - ဤ EA ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အန္တရာယ်အားလုံးနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးသင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ရလဒ်များအတွက်တစ်ခုတည်းသောတာ ၀ န်ရှိသည်ဟုသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်တာ ၀ န်မျှမရှိပါ။ ဤအမှု၌ဂရုတစိုက်သတိပြုသင့်သည်မှာအတိတ်ကရလဒ်များသည်အနာဂတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုညွှန်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။
အရေးကြီး: အဆိုပါ CTHour1-6 parameters တွေကိုအာရုံစိုက်! သူတို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါသည်များမှာ! သင့်လျော်သောရလဒ်များကိုရနိုင်ရန်အတွက်, သင်သည်သင်၏ပွဲစားဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်အော့ဖ်ဆက်အညီမှန်မှန်ကန်ကန်သူတို့ကိုခန့်ထားရန်ရှိသည်။ အောက်က parameters တွေကိုရှင်းပြချက်ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ
TicksTrade - "အယူမှား" လျှင်, ယုတ္တိဗေဒမဟုတ်ရင်ကြောင့်အသစ်တခုစျေးနှုန်းကို tick အပေါ်တွက်ချက်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးမည်, M1 ဘားရဲ့အစမှာကွပ်မျက်ခံရလိမ့်မည်။
မှားယွင်းသော / စစ်မှန်တဲ့ StealthMode - ရပ်တန့်အရှုံးဖုံးကွယ်နှင့်ပွဲစားများမှသူတို့ကိုမမြင်ရတဲ့အောင်အစီအစဉ်ကိုယုတ္တိဗေဒအတွက်အမြတ်အစွန်းအဆင့်ဆင့်ယူပါ။ သင်ဤ mode ကို, ထိုမှတ်တိုင်အရှုံးကိုသုံးပါနှင့်အမြတ်အစွန်းအမိန့်ယူလျှင်ကုန်သွယ် server ကိုတည်ရှိသောကြသည်မဟုတ်။
EmergencyStopDist - StealthMode အသုံးပြုသောအခါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဒုတိယအဆင့်ကို။ သုညထက်ကြီးမြတ်တန်ဖိုးများမှာကကို virtual ဝှက်ထား StopLoss တည်ရှိသည်ထက် သာ. ကြီးမြတ်အကွာအဝေးအပေါ်စစ်မှန်တဲ့ (အရေးပေါ်) StopLoss ၏ဒုတိယအဆင့်ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်သစ်ကိုအရေးပေါ် StopLoss ၏တန်ဖိုးသည် EmergencyStopDist တန်ဖိုးကိုပေါင်းက hidden StopLoss ၏တန်ဖိုးများ၏ပေါင်းလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
MinEquity - ကုန်သွယ်လိုအပ်အနည်းငယ်မျှသာရှယ်ယာ။
BandPeriod - Bollinger တေးဂီတအဖွဲ့ကာလ။
BandBreakEntry - တစ်ဦးဆန့်ကျင်ဘက်ကုန်သွယ်မှုအစပျိုးဖို့ BB လိုင်း၏ 4-ဂဏန်း pips အတွက် breakout (တန်ဖိုးအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်) ။
BandBreakExit - လက်ရှိကုန်သွယ်မှုပိတ်ပွဲစတင်ရန်ဆန့်ကျင်ဘက် BB လိုင်း၏ 4-ဂဏန်း pips အတွက် breakout (တန်ဖိုးအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်) ။
UseTrendFilter - သင်အောက်ကနှစ်ခုစရဖများကသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်၏ညှနျကွားတှငျသာရောင်းဝယ်ဖောက်ချင်တယ်ဆိုရင် "စစ်မှန်တဲ့" ဤပြောင်းပေးပါ။
MA_Fast_Period - အစာရှောင်ခြင်းပျှမ်းမျှကာလရွေ့လျား။
MA_Slow_Period - ပျှမ်းမျှကာလရွေ့လျားနှေးကွေး။
TimeRestriction - ထို EA ၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနာရီအတွင်းသာရောင်းဝယ်ဖောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီ "စစ်မှန်သော" ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအခြိနျ filtration အသုံးပြုချင်ကြဘူးဆိုလျှင်, "မှားယွင်းသော" ဤ parameter သည်ပြောင်းပေးပါ။
CTHour1 -6- ကုန်သွယ်နာရီခြောက်လဖြစ်နိုင်သော slot နှစ်ခု။ တန်ဖိုးများကို0- 23 ကဒ်အထိုင်ကိုသက်ဝင်။ ကဒ်အထိုင်ပိတ်ထားဖို့ 55 ကဲ့သို့ကြီးမားသောတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေအကောင်းဆုံးရလာဒ်များ 21 နှင့် 22 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်မှာအောင်မြင်နေကြသည်။ သငျသညျလုံးဝသင့်ရဲ့ပွဲစားများဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်ပြောင်းကုန်ပြီဤနာရီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သငျ့သညျ။ ကို default တန်ဖိုးများ GMT +2(ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ) အတွက်အဆင်ပြေအောင်နေကြသည်။
မှားယွင်းသော / စစ်မှန်တဲ့ WednesdaySwapFilter - ထိုလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ် MaxNegSwapPips parameter သည်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားလျှင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ် filter ကို, အကအနုတ်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်၏ညှနျကွားထဲမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဦးယံ၌ရှိသမျှသောအရောင်းအဖျက်သိမ်း။
MaxNegSwapPips - အနုတ် 0.5 pips ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တံခါးခုံပုံရသည်။
မှားယွင်းသော / စစ်မှန်တဲ့ RolloverTimeFilter - အပေါ် / ပိတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့အချိန် filter ကိုပြောင်းပါ။
MinutesBefore - အားလုံးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်စစ်ဆင်ရေးဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်သည့်အတွက်သန်းခေါင်မတိုင်မီမိနစ်အချိန်ကြားကာလ။
MinutesAfter - အားလုံးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်စစ်ဆင်ရေးဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်သည့်အတွက်သန်းခေါင်ပြီးနောက်မိနစ်အချိန်ကြားကာလ။
x_MaxSpreadFilter - အပေါ် / ပိတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့အပိုဆောင်းပြန့်ပွား filter ကိုပြောင်းပါ။
x_MaxSpread - အားလုံးကုန်သွယ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပယ်ဖျက်မီ, ယေဘုယျအားဖြင့်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်သည့်ကနဦး MaxSpread, များပြား။ အဆိုပါ MaxSpread6နှင့် x_MaxSpread2ဖြစ်ပါတယ်လျှင်ပြန့်ပွား6×2= 12 pips ထက်ကျော်လွန်လျှင်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, အားလုံးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်စစ်ဆင်ရေးဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
RecoveryMode - ထို drawdown ပြန်လည်နာလန်ထူကိုသက်ဝင်။ လာသောအခါ AutoMM>0ဒါဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်။